Ny fiverenan’ilay vorona calao menapiny tenda any Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2022 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Português, English
Vorona calao menapiny tenda. Sary avy amin'ny mpisera Ron Knight, CC BY 2.0.
Naharitra efa ho 200 taona ny fametrahana ny fiverenan'ny vorona Calao menapiny tenda (Aceros nipalensis) tany Nepal, hita farany tao amin'ny firenena tamin'ny taona 1829. Nahita sy naka sary vorona calao menapiny tenda lahy roa tamin'ny 21 Desambra 2021 tao Sim Dhap ao amin'ny Kaominina Suryodaya any atsinanan'i Nepal distrikan'i Ilam ilay mpaka sary biby mpirenireny Deven Kharel. Ilay mpandinika ny zavaboary Brian Hodgson no nahita an'io vorona io tany Nepal tamin'ny taona 1829 ary namorona ny anarana siantifika hoe Buceros nipalensis. Talohan'ny fahitan'i Kharel, voalaza fa lany tamingana tany Nepal ireo vorona ireo na dia mbola hita tany India, Bhutan, Shina, Myanmar, Laos, Thailand ary Vietnam aza.
“Iray amin'ireo zava-bita lehibe indrindra teo amin'ny asako amin'ny maha mpaka sary biby mpiriorio ahy izany,” hoy i Kharel niresaka tamin'ny Global Voices an-telefaona avy any amin'ny distrikan'i Ilam any atsinanan'i Nepal. Nilaza ihany koa izy hoe:
Tsy nisy olona naka sary an'io vorona io tany Nepal talohan'io. Sambany ihany koa aho no naka sary vorona hafa tany Nepal, anisan'izany ny voromailala maitso sy ny vorona mpitsaingoka voninkazo.
Naka sary karazany efatra tamin’ny vorona calao hita any Nepal i Kharel: ny calao lehibe any Besibazar, Mechinagar ao amin'ny distrikan'i Jhapa; ny calao tatsinanana Alan'ny fokonolona any Bansbari, Mechinagar, Jhapa; ny calao volondavenona Indiana any Kakarvitta, Mechinagar, Jhapa; ary ilay hitany farany tao amin'ny Kaominina Suryodaya any Ilam.
Vorona Calao any Nepal: (Ankavia miankavanana) Calao menapiny tenda, calao lehibe, calao volondavenona indiana ary calao tatsinanana, nalaina sary tany atsinanan'i Nepal. Avy amin'i Deven Kharel ny sary rehetra. Nahazoana alalana.
Nanoratra tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro Nayapatrika momba ny fahitana ireo calao menapiny tenda tamin'ny taona 1850 ilay mpandinika ny zavamananaina Kamal Maden ary nanakiana ny mpanoratra ny boky Torolalana ho an'ny Voron'i Népal tamin'ny filazana fa saika ho lany tamingana any Nepal ilay vorona. Ho setrin'ny fanakianana nataon'i Maden tamin’ny tsy fisian'ny fikarohana natao momba ny calao menapiny tenda, dia nanoratra tao amin'ny Facebook i Carol Inskipp, iray amin'ireo mpanoratra ny boky:
Koa satria foana tanteraka ny fisian'ny calao menapiny tenda avy ato Nepal nandritra ny efa ho 200 taona, dia firaketana manan-danja ny fahitan’i D. Kharel an'ity karazam-borona tandindomin-doza maneran-tany ity tamin'ny taona 2021, izay tokony havoaka amin'ny diary nodinihina miaraka amin'ny sary tany am-boalohany. Fanampin'izany, ilaina ny fanadihadiana fanampiny mba hamaritana raha monina ao amin'ny firenena ilay karazana na mpitsidika tsindraindray fotsiny ary hamaritana ny halehiben'ny toeram-ponenana mety ihany koa.
Carol Inskipp, Tim Inskipp ary Dr Hem Sagar Baral
Famantarana ny fahasalaman'ny ala
When he discovered it, Hodgson wrote about this beautiful bird, in 1833:
Rehefa nahita izany izy, nanoratra momba an’io vorona tsara tarehy io i Hodgson tamin’ny taona 1833:
Ity karazana miavaka sady lehibe dia lehibe ity, izay nananako tombony tamin’ny fibanjinana tamim-pahafinaretana tamin’ny karazany velona, ny refiny manomboka amin’ny tendron’ny elany iray ka hatramin’ny iray hafa, 1,30 m ; ary ny tendron'ny vavany ka hatramin'ny tendron'ny rambony izay 1.05 m, ary ny vavany izay 20 sm, ary ny rambony 42 sm.
Nisioka avy any India ny Orina Mpanasoa Nature in Focus hoe:
#NiFHiveFeature: Naka sary ny calao menapiny tenda any Latpanchar i Bibaswan Sarkar, #Bengal Andrefana.
Araka ny voalazan'ny anarana, miloko menapiny ny lohany, ny hatony ary ny ambanin’ny calao lahy, fa ny vavy kosa mainty amin'ny ankapobeny.#birdphotography pic.twitter.com/VYiu9Ipm19
Hoy ilay mpisera Twitter Trooper (@pnkjshm) hoe:
Iray amin'ireo calao Bucerotine lehibe indrindra. Tandindonin-doza ao amin'ny lisitra Mena IUCN miaraka amin'ny vorona lehibe latsaky ny 10.000 tavela any an'ala.
Calao menapiny tenda (Aceros nipalensis)
Hita any avaratratsinanan'i India sy Azia atsimo atsinanana. Lany tamingana any Nepal noho ny fihazana sy ny fahaverezan'ny toeram-ponenana #NWW2020 #IndiAves #IndiWild pic.twitter.com/COlx9XFulm
Nosokajian'ny International Union for Conservation of Nature (IUCN) ho “marefo” ny calao menapiny tenda. Ireo vorona tsy mpifindra monina ireo dia manana toetra manambady tokana ary manao toerana fanatodizana ao anaty lavaka voajanahary sy lavaka amin'ny hazo antitra sy lava. Koa satria mila faritra midadasika amin'ny ala misy hazo lehibe izy ireo hanatodizana, dia midika ny fisiany fa salama tsara ny ala. Manana anjara toerana lehibe amin’ny fanaparitahana voa koa izy ireo.
Hoy ilay mpisera Twitter GoneBirding (@Staring_Space) nizara:
Ilay calao menapiny tenda tsara tarehy. Mitondra voaroy hamahanana ny vavy izy eto. Mahazatra amin'ny vorona toy ny amin'ny olombelona io fanomezana sakafo io mandritra ny fombafomba fivadiana.
Atahorana noho ny fahapotehan'ny toeram-ponenana sy ny fizarazarana, ny fandripahana ala, ary ny fihazana sy ny fanaovana fandrika ho an'ny varotra biby ompiana ireo vorona ireo. Na izany aza, tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny famonjena ala fa hitondra fampiroborobona ny fizahan-tany goavana ho an'ny Distrikan'i Ilam ihany koa ny fiarovana azy ireo, toy ny any Latpanchar, tanàna kely iray any amin'ny faritra manodidina an'i India, Distrikan'i Darjeeling.